मिर्गौलाको पत्थरीबाट छुट्कारा पाउने घरेलु उपाय
फागुन २५, २०७४ शुक्रवार १९:०५:१९ प्रकाशित
मिर्गौलामा पत्थरी समस्या आजकाल धेरै देखिन थालेको छ । खानपान तथा दिनचर्याका कारण आजकाल लाखौं मानिस यसको समस्या बेहोर्न बाध्य भइरहेका छन् । मिर्गौलामा पत्थरी हुँदा निकै पीडा हुन्छ । कतिपयमा यो आनुवंशिक समस्या पनि हुन सक्छ । पत्थरीलाई आजकाल अपरेशन गरेर सजिलै निकाल्न पनि सकिन्छ । तर केही घरेलु उपायबाट पनि पत्थरीबाट बच्न सकिन्छ । जब नुन र अन्य खनिज पदार्थ एकआपसमा सम्पर्कमा आउछन् । त्यसपछि पत्थरी बन्न सुरु हुन्छ । मिर्गौलाको पत्थरीको आकार अलग अलग हुन सक्छ । केही साना हुन्छन् भने केही ठूला । विशेषतः सानो खालको पत्थरीलाई पिसाबमार्फत् पनि निकाल्न सकिन्छ । यसका लागि केही प्राकृतिक उपायका बारेमा जानकारी लिऔं ः
१. अंगुरको सेवन
मिर्गौलाको पत्थरी निको पार्न अंगुरको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अंगुुरले प्राकृतिक मूत्रबद्र्धकको रुपमा कार्य गर्छ । यसमा पोटासियम
र पानी भरपूर मात्रामा हुने हुनाले पनि यसले मूत्रबद्र्धकको काम गर्छ । अंगुरमा एल्बुमिन र सोडियम क्लोराइड निकै कम मात्रामा हुन्छ, जसले गर्दा यसलाई मिर्गौलाको पत्थरीमा राम्रो मानिन्छ ।
२. तितो करेला
करेला निकै तितो हुन्छ । त्यसैले यसलाई निकै कम मानिसले मात्र मन पराउँछन् । तर मिर्गौलाको पत्थरीका बिरामीका लागि यो रामवाण सिद्ध हुन्छ भनिन्छ । करेलामा पाइने म्याग्नेसियम र फस्फोरसले पत्थरी बन्नबाट रोक्छ । यसैले मिर्गौलाको पत्थरी भएकाहरुले यसलाई उपयोग गनुृपर्छ ।
मिर्गौलाको पत्थरीबाट छुट्कारा पाउन नियमित रुपमा केरा सेवन गर्नुपर्छ । यसमा भिटामिन बी ६ हुन्छ । यो तत्वले अक्जेलेट क्रिस्टल बन्नबाट रोक्छ र स–साना ढुंगालाई टुक्रा पार्छ । एक अनुसन्धानअनुसार भिटामिन बीको १ सय देखि १ सय ५० मिलिग्राम दैनिक रुपमा सेवन गर्नाले मिर्गौलाको पत्थरीमा फाइदाजनक हुन्छ ।
४. बेथेको साग
मिर्गौलाको स्टोन निकाल्नका लागि बेथेको साग उपयोगी मानिन्छ । यसका लागि आधा किलो बेथेको साग उमालेर छान्नुपर्छ र त्यसमा मरिच, जीरा र हल्का रुपमा सिधे नुन मिसाएर दिनमा चारपटक पिउनुपर्छ यसो गर्नाले मिर्गौलाको स्टोनमा फाइदा हुन्छ ।
५. निम्बुको रस
जैतुनको तेलका साथ निम्बुको रस मिसाएर सेवन गर्नाले मिर्गौलाको स्टोनमा फाइदा पुग्छ । दुख्यो भने ६० मिलि निम्बुको रसमा उत्तिनै मात्रामा अर्गानिक जैतुनकोतेल मिसाएर सेवन गर्नाले पेट दुखेकोमा आराम हुन्छ । निम्बुको रस र जैतुनको तेल दुवै सबै खालको स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ र सजिलै उपलब्ध हुन्छ ।
प्याजमा स्टोननाशक तत्व हुन्छ । करिब ७० ग्राम प्याज पिसेर त्यसको रस पिउनुपर्छ । बिहान खाली पेटमा नियमित रुपमा प्याजको रस पिउनाले पत्थरीका छोटा छोटा टुक्रा भएर पिसाबाट निस्कन्छन् ।
ज्वानो पनि पिसाब बढाउने पदार्थ र मिर्गौलाका लागि टनिकको रुपमा काम गर्छ । मिर्गौलामा स्टोन बन्न नदिनका लागि ज्वानोलाई मसलाको रुपमा या चियामा नियमित रुपमा सेवन गर्न सकिन्छ ।
तुलसी कयौं बिरामीका लागि लाभदायक मानिन्छ । तुलसीका चियाले मिर्गौलाको स्टोनबाट छुटकारा पाउन सहयोग मिल्छ । तुलसी चिया पिउनाले पत्थरी पिसाबबाट निस्कन्छ । कमसेकम एक महिना नियमित रुपमा तुलसीको पातको रस महका साथ लिनाले स्टोनको समस्या हट्न मद्धत गर्छ । तुलसीको पात बिहानै चपाउन पनि सकिन्छ ।
अनारको रसले पनि मिर्गौलाको पत्थरी हुन दिँदैंन । खासगरी यसका बियाँ र रसमा भएको टर्रोपनका कारण मिर्गौलाको स्टोनमा प्राकृतिक औषधिको काम गर्छ ।
यस्ता उपायले पत्थरीबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । यिनीहरु किफायती र असरदार पनि हुनछ । तर यसरी पनि फाइदा भएन भने तत्काल चिकित्सकलाई सम्पर्क गने बिर्सनुहुन्न ।
५. सकारात्मक सोच दीर्घायु जीवनको आधार : राष्ट्रकवि घिमिरे